Musiibada Dhawacyada Real Madrid Oo Halkeeda Ka Sii Socota Iyo Saxiix Cusub Oo Dhaawac Ku Soo Laabtay. - Gool24.Net
Musiibada Dhawacyada Real Madrid Oo Halkeeda Ka Sii Socota Iyo Saxiix Cusub Oo Dhaawac Ku Soo Laabtay.
Kooxda Real Madrid ayaa xili ciyaareed dhibaato wayn kala kulmaysa dhaawacyada badan ee ku habsaday ciyaartoyda kooxdeeda laakiin wali waxaa sii socda musiibada dhaawacyada xidigaha Madrid.
Saxiixa cusub ee Luka Jovic ayaa markale dhaawac soo gaadhay intii lagu jiray dhawr daqiiqo oo kaliya oo uu u ciyaaray xulkiisa Serbia intii lagu jiray kulankii ay guuldarada kala kulmeen Portugal.
Luka Jovic ayaa badal ku soo galay kulankii Portugal markii ay saddex daqiiqo oo kaliyi ka hadhsanaayeen, laakiin haddana waxa uu la kulmay dhaawac ku soo laabtay.
Luka Jovic ayaa markii labaad dhaawac soo gaadhay muddadii koobnayd ee uu Real Madrid joogay waxayna arintani walwal cusub ku abuuraysaa jamaahiirta Madrid iyo Zidane oo aan wali warag wixii ay ka filayeen.
Daqiiqadii 87 aad oo uu ciyaartii Portugal uu Luka Jovic soo galay waxay ahayd waqti aad ukooban, laakiin waxaa la xaqiijiyay in uu ku soo laabtay dhaawicii uu dhawaan ka soo laabtay.
Zinedine Zidane ayaa wali sugaya in uu arko Eden Hazard oo kulankiisii ugu horeeyay u ciyaaraya Madrid laakiin in Luka Jovic uu dhaawac ku soo laabtay waxay noqonaysaa mid xidiga reer Serbia xaalad xun ku abuuri karta.
Marco Asensio oo ka mid ah ciyaartoyda Real Madrid ee waqtiga dheer dhaawaca ku maqnaanaya ayaa muuqaal ku soo bandhigay halka uu ka marayo xaaladiisa caafimaad iyada oo wali ay bilo badani u hadhsan yihiin.
Laakiin iyada oo Zidane uu sii maaranayay maqnaanshaha xidigaha ay Eden Hazard iyo Marco Asensio ka mid yihiin, waxa uu hadda warkiisa sugayaa Luka Jovic kaas oo ay niyadjab ku tahay in dhaawicii ku soo laabtay.
Wargayska Marca ee magaalada Madrid ka soo baxa ayaa shaaciyay in Luka Jovic uu dhaawac soo gaadhay dhawrkii daqiiqo ee uu ciyaaray kulankii Serbia iyo Portugal.
Laakiin waxaa la sugayaa haddii Luka Jovic uu ka soo kabsan doono dhibaatada cusub ee soo wajahday oo uu diyaar u noqon karo kulanka Levante ee horyaalka La Liga.